Diyaaradda gaarka ah ee Lionel Messi oo lagu qasbay inay deg deg ugu degto garoonka diyaaradaha Brussels – Gool FM
(Brussels) 03 Abril 2019. Diyaaradda gaarka ah ee Lionel Messi ayaa lagu qasbay inay si deg deg ah ugu degto garoonka diyaaradaha Brussels ee Zavantem airport saakay oo Jimce ahayd, kaddib markii ay cillad la soo daristay.
Ma cadda in ciyaaryahanka Barcelona uu diyaaradda saarnaa waqtigaas, laakiin waxa ay ku soo degtay garoonka diyaaradaha Zavantem airport saakay marka ay saacaddu ahayd 9:10 subaxnimo sida ay warinayo warsidaha Belgian ka soo baxa ee HLN.
90 daqiiqo kaddib ayaa la sheegay inay duushay markale ka hor inta aysan dib ugu soo laaban haddana caasimadda Belgian.
Messi ayaa diyaaraddan la yiraahdo Gulfstream V waxa labo sano ka hor ku soo iibsaday 13 milyan oo euro uu dhiganta 11.5 milyan oo gini, waxaana qeybta dambe ee diyaaradda lagu xardhay lambarka 10-aad ee uu caanka ku yahay Messi sidoo kalena waxaa diyaaraddan qeybo ka mid ah ku qoran magaciisa, magaca xaaskiisa iyo kuwa carruutiisa.
Maamulka garoonka diyaaradaha ee Magaalada Brussels ayaa diiday inay ka hadlaan dhacdadaas sababo la xiriira sharciga GDPR.
Diyaaraddaan nooca raaxada ah waa mid ku habboon kabtanka kooxda Barcelona, xitaa haddii ay si deg deg ah ugu degtay magaalada Brussels kaddib markii ay la soo gudboonaatay cillad farsamo.
Waxaa diyaaraddaan farsameysay shirkad Argentina ah waxaana ay u naqshadeeyeen oo ay ugu talo-galeen Messi iyo qoyskiisa.
Diyaaraddaan waxa ay ku faantaa dhowr waxyaabood oo cajiib ah oo ay ku jirto inay leedahay jiko aad qurux badan.
Sidoo kale waxa ay leedahay labo musqul, waxaana diyaar ku ah goob ay farriistaan oo ku filan 16 qof.
Sheekada yaabka leh waxa ay tahay in kuraasta ay sidoo kale laabmi karaan oo loo rogi karaa siddeed sariir!
Diyaaradda halka laga fuulayo ayaa sidoo kale waxaa ku qoran Magacyada Messi iyo qoyskiisa sida xaaskiisa Antonella, oo lagu daray carruurtiisa Thiago, Ciro iyo Mateo.
Si kastaba ha ahaatee, diyaaraddaan lambarka 10-aad uu gadaal uga xardhan yahay ayaan ahayn mid uu si shaqsi ah inta badan u adeegsado Messi, laakiin taas bedelkeeda waa uu kireystaa marka uu doono.